Araka ny ho hitanao ao anatin’ity horonantsary fohy, Paris no tena mavitrika tanàna izay miorina ao Atsimon’i Frantsa. Tena mahafinaritra ny velona, amin’ny ranomasina Mediteranea mahonon-tena amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro (momba Talaky masoandro andro isan-taona).
Izy ireo ihany koa ny te-handeha ho any Frantsa sy ny manodidina an’i Eoropa. Ao Paris be dia be ny toerana tsara tarehy mandany ny fotoana malalaka sy ny namana vaovao. Eto Dia afaka hihaona be dia be ny tanora, ny ankamaroany dia tanora lahy, matetika ihany na ao amin’ny orinasa ny namana.
Na dia ao amin’ny lohataona, rehefa ity lahatsary ity dia nalaina tao Paris ny andro tsara. Ny tanàna voahodidina maro amoron-dranomasina, tsara ho an’ny olom-pantany sy fotsiny ny folo minitra fiara avy any an-tanàna. Maro ny vakoka manan-tantara sy ny toerana fa tokony hitsidika, fara fahakeliny, indray mandeha eo amin’ny fiainana, toy ny Romana aqueduct. Izany dia azo atao ny milaza fa izany dia tsara ny miaina any Frantsa:
Mediterane ny sakafo, ny fomba fiainana, tsy ho levona ny masoandro sy ny filaminana ireo teny izay mamaritra izany fahiny-tanàna. Ianao tia kely ireo vato eny an-dalambe, ny malaza trano fanaovana Opera sy Hatsikana ny kianja dia ny foibe ity ny tanora ao an-tanàna.
Ny toe-draharaha any Frantsa
Rosiana matetika ny vehivavy no milaza fa ny olona ny firenena tsy lehibe, tsy malemy fanahy, ratsy, misotro, ary tsy miasa. Ary izy ireo dia tsy vonona ho amin’ny fifandraisana matotra. Any Eoropa Atsinanana mitranga matetika mba hihaona ny iray vehivavy ny iray na roa ny ankizy; ny olona efa lasa ary tsy misy vaovao.
Frantsay lehilahy manana ny hatsarany ny gallant, ary koa ny famaizana, dia manome lanja ny fitiavana. Izy ireo no lehibe, ny fanajana ny vehivavy rehetra, rosiana na tsia, ny fikarakarana ho azy akanjo tsara ka matetika mandray anjara amin’ny fanatanjahan-tena. Fanampin’izany, dia mandray anjara amin’ny raharaha ao an-tokantrano.
Tanora lehilahy any Frantsa te-hahomby eo amin’ny fiainana.
Maro no mitady toerana avo na hamorona ny raharaham-barotra
Izy ireo dia tena tsara karama. Izy ireo ihany no mba hitsena ny fitiavana.
Satria ny fanabeazana ny fanohanana ny zon’ny vehivavy ao Frantsa ao ny taona, ny vehivavy dia lasa bebe kokoa, ary tsy miankina. Amin’izao fotoana izao, iray matetika dia misedra ny frantsay na dia maherin’ny fa milalao miaraka amin’ny lehilahy toy ny»saribakoly»izay mifandray amin’ny azy ireo ihany ho an’ny firaisana ara-nofo tsy rahampitso. Matetika izany dia tsy azo mialoha ny fifandraisana maharitra (ohatra: fanambadiana na wedding planning).
Farany, ao Frantsa be dia be ny olona iray (lehibe ny olona) izay reraka ny fanirery sy ny fe-potoana fohy ny fifandraisana; izy ireo dia mitady maharitra sy ny fifandraisana matotra
Vidio karajia serasera →